Amanqaku kaPrasanna Chitanand kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Prasanna Chitanand
Ukuvela kohlalutyo oluqikelelweyo kwintengiso ye-imeyile sele idumile, ngakumbi kwishishini le-ecommerce. Ukusebenzisa itekhnoloji yokuthengisa kwangaphambili inamandla okuphucula ukujolisa, ixesha, kwaye ekugqibeleni uguqule ishishini elingakumbi nge-imeyile. Le teknoloji idlala indima ephambili ekuchongeni ukuba zeziphi iimveliso abathengi abanokuthi bazithenge, xa banokuthenga, kunye nomxholo olungiselelwe wena ozakuqhuba umsebenzi. Yintoni iNtengiso yokuQikelela? Ukuthengisa kwangaphambili sisicwangciso